पोखरामा मंगलबार बाट आहा ! रारा गोल्डकप सुरु हुँदै – Fewa Times
पोखरामा मंगलबार बाट आहा ! रारा गोल्डकप सुरु हुँदै
प्रकाशित मिति: January 22, 2018 5:18 pm
पोखरामा आहा ! रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको १६औं संस्करण मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजक सहारा क्लबले जानकारि दिएको छ ।
उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा र सुदूरपश्चिम स्पोर्टिङ क्लब भिड्नेछन् । प्रतियोगितामा तीन विभागीय टिम–त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी, दुई विदेशी टिम–बरिन्धरा बंगलादेश र भारतको सिक्किम युनाइटेड, मोफसलका टिम–धरान फुटबल क्लब, झापा–११ र ‘ए’ डिभिजनको संकटा क्लब गरी १२ टोलीले भाग लिनेछन् ।
विजेता टिमले ७ लाख १ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले ३ लाख ५१ हजार पाउनेछ । भीआइपी प्यारापिट भत्काइएकाले यो वर्ष दर्शक भने खाली चौरमा बस्नुपर्ने भएको छ । यो वर्ष भाग्यमानी दर्शकले टीभी र स्कुटर पुरस्कार पाउनेछन् ।
अशोकको सपना पुरा गर्न झिना मसिना कुराले छेक्दैन भन्दै अशोकको दोस्रो गित निर्माण कार्य शुरु हुदै
मेगा बैंकमा काम गर्ने २५ बर्षिय मनिषाको ज्यान हस्पिटल लियो
मिस टुरिजम–२०१८ को आवेदन खुल्ला, १८ देखि २५ वर्षीय अविवाहित महिला सहभागिता